ဓာတ်သေပညာ (အပိုင်း-၁) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Photography » ဓာတ်သေပညာ (အပိုင်း-၁)
Posted by ဂန္ဓာရီ ဆြာအုပ် on May 29, 2013 in Photography | 36 comments
၃ မိနစ်အတွင်းဆရာဖြစ်နည်း ရက်ရှည် သင်တန်းပြီးတဲ့ အခါ..အများရဲ့ တောင်းဆိုချက်များ အရ (ဟုတ် ဟုတ် မဟုတ် ဟုတ် ဂလိုပဲရေးသည်) ဓာတ်သေပညာ အကြောင်း ကိုထပ်မံပို့ချလိုက်ပါဂျောင်း
ခုတင်ပြမှာကတော့ ဓာတ်သေပညာ ဖြစ်တဲ့အတွက် နဲနဲ ရှုပ်ချင်လည်း ရှုပ်ပါမယ်.. မရှုပ်ချင်လည်း မရှုပ်ပါဘူး.. မရှုပ်ပေမယ့် တစ်ခါတစ်လေ လူအထင်ကြီင်္းအောင် ရှုပ်ထားတာကြောင့် ရှုပ်တာတွေလည်းရှိပါမယ်… ရှုပ်လို့ နားမလည်ရင် မမေးပါနဲ့ ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးပီး သိအောင်လုပ်ပါ (ဟီး ပြန်လည်းမဖြေတတ်တော့)
အပိုင်း-၁ ကိုတော့ အခေါ်အဝေါ်တွေနဲ့စပါမယ်. ဓာတ်သေပညာ မှာ လူအထင်ကြီးအောင် များများ ပြောရမယ့် စကားလုံးတွေက
ရှက်တာစပိ ( shutter speed)
ISO/ ASA အဲဒါတွေဖြစ်ပါတယ်
အိတ်စပိုရှာ ဆိုတာကတော့ ကင်မလာထဲကို အလင်းဘယ်လောက်ရောက်သလဲ ဆိုတဲ့ အတိုင်းအတာဖြစ်ပါတယ်.. အိတ်စပိုရှာ များသွားတဲ့ ပုံဟာ ဖြူဖွေးသွားပြီး၊ နဲသွားတဲ့ ပုံဟာ မှောင်သွားတာ တွေ့ရမှာ ပါ။ တစ်ခါတစ်လေ ကင်မလာနဲ့ရိုက်လိုက်တဲ့ အခါ မှောင်မဲနေတဲ့ ပုံတွေ ထွက်လာပြီး တခါတလေ ဖွေးနေတဲ့ ပုံတွေတွေ့ရမှာ ပါ .. ဒါဆို ဆရာကြီးလုပ်ပြီးပြောရမယ့် စကားက “ပုံက ဖွေးနေရင် အိတ်စပိုရှာ များသွားပြီ၊ မှောင်နေရင် အိတ်စပိုရှာ နဲသွားပြီ” ပေါ့နော် .. ပုံမှန်ပုံဆိုရင်တော့ အိတ်စပိုရှာ မှန်တယ်ပေါ့ဗျာ..
အဲ တခါတလေ တမင်တကာ ဖွေးနေအောင် အိုဗာ(over) လုပ်ရိုက်ထားတဲ့ပုံတွေ.. မှောင်နေအောင် အန်ဒါ (under) လုပ်ရိုက်ထားတဲ့ ပုံတွေလည်း တွေ့ရပါမယ် ..
ဒီပုံမှာ ဆိုရင် CJ7ကောင်လေးဟာ ပုံ ၁ မှာ under ဖြစ်နေပြီး. ပုံ ၃ မှာ over ဖြစ်နေပါတယ်.. အလယ်ကတော့ အိတ်စပိုရှာ မှန်တယ်ပေါ့ဗျာ။
ဆရာဂန္ဓာရီဆြာအုပ်​ တပည့်​​ကျော်​ ဖတ်​မှတ်​သွားပါ​ကြောင်း။
အပိုင်း ၂ မြန်မြန် တင် ပါ . . ဆြာအုပ် ရေ . . . . . မျှော်နေတယ် ဗျ။
နည်းနည်းချင်းစီ သင်မှပဲ ခေါင်းထဲဝင်တော့မယ်။
ဦးဏှောက်က ပလိန်းဖြစ်နေလို့ အများကြီး တစ်ခါတည်း သင်ရင် အံချော်ထွက်ကုန်ပြီး ဘာမှမသိတော့ဘူး။
ဒါ့ထက် ဥက္ကဌကြီးပဒုမ္မာက ခုရက်ပိုင်း ဓာတ်ပုံသင်တန်းတစ်ခုတွေ့လို့ မေးမိပါတယ် သင်တန်းကြေး ၁သိန်းဆိုလို့ ၂ယောက်သား ဇက်ပုသွားရတယ်။
ဖရီးသင်ပေးမယ့် ဆရာရှိလို့သာ တော်တော့တယ်။ :hee:
စီးဖု (တရုတ်ကားထဲမှာ ဆရာ လို့ခေါ်ရင် အဲလိုပဲ ကြားလို့)
ဓာတ်သေပညာကို လေ့လာ လိုက်စားမယ်လို့ ကြံစည်ပြီး ဘယ်က စရမှန်းမသိဖြစ်နေချိန်မှာ
ဂလို စီးဖု ရဲ့ ပို့(စ) ကို မြင်လိုက်ရတော့ ဘယ်လို ဝမ်းသာမှန်းမသိတော့ပါဘူးလေ။
အော်.. အစားသမားဒွေများ ..ခက်စ်တာ ..ဆရာသမားကိုတောင် Sea Food တဲ့ ..။
ဆြာအုပ်ရေ …ခီညားကို ဂဏန်းဒွေ ပုစွန်ဒွေလို့ မြင်နေသလားမသိ.. အာ..ဟိ
နာ့ ဟာ နာ စားချင်တာတွေ ကြားတာ ဘာပုဒုန်း။
တို့ တာ ကိုတော့ (တတ်ချင်းကို ပြောတာပါ)
စီးဖု ဂီ ဆီ မှာပဲ ဆည်းပူး ပါရစေ။
ကျုပ်က ငချွတ်ပါကွီ .. ရှင်မထီးဆီမှာသာ ဆည်းပူးပါ..
ဟာ … မိုက်တယ် ဆြာအုပ် …
အားပေးတယ်ဗျို့ ..ဒါမိုး များများရေးပေးပါဗျ…
ကို KZ တရုတ်လိုပြောရရင်ဖြင့် မခံယူဝံ့ကြောင်းပါဗျာ ..
ကို kyaw hteik တစ်နေ့တစ်ပိုင်းကတော့ ကြိုးစားသွား ပါမည်..
ကျူပ်ရဲ့ ဘစ်ဇစ်သင်တန်းပီးရင် ခင်ဗျားတို့က ဆရာတွေဆိုတော့ အက်ဗန့် သင်တန်း ထပ်ဖွင့်ပေးရမှာ နော်.. ပြင်ထား
မ Ma Ma ဆာတီဖစ်ကိတ် ကတော့ပေးရမှာ ပေါ့ဗျာ ဘယ်နေမလဲ. fb မှာ လာယူကြနော်
ကိုယ် တော်မဲ့ တပည့်က အထီးမှန်း အမ မှန်း မသိဘူးလားတော့။
ခင်ညားတို့က …ဖော်…ပြ… ထားတာမှ မဟုတ်တာဗျ
သင်တန်းလာတက်ပါတယ် .. စာရေးလာပေးတာ တော်တော်များနောက်ကျသွားပြီလားမသိဘူး ..
သင်တန်းကို အဝေးကြီးကလာရတာမို့လို့ နောက်နေ့တွေ များများလေးသင်ပေးနော် ..
သင်တန်းပြီးရင် ကျောင်းဆင်းပွဲနဲ. ဆာတီဖီကိတ် ပေးပွဲလုပ်မယ်မို.လား… တက်မယ် တက်မယ်..
သင်တန်းပြီးရင် ဆြာအုပ်က သင်တန်းသား တစ်ဦးစီကို Canon FOS650D 18-135MM တစ်လုံးစီပေးမှာဟုတ်လားဟင်င်င်င်င်…… :hee: :hee:
EOS ပါကရွှေတိက်ရယ် လုပ်ရော့မယ် ..650D မဟုတ်ဘူး 5DM3 ပေးမှာ
အင်းအင်းဟုတ်တယ်… ဆြာအုပ်ပြောတဲ့ဟာ… ဂယ်ပေးမှာနော်… တက်အုံးမှာ.. ဟိဟိ
ဆြာအုပ်။ ကျေးဇူးပါ။ ကျမ ကအမြဲ auto mode နဲ့ပဲရိုက်တတ်တယ်။ ည ဘက်မြင်းကွင်းတွေကိုကောင်းကောင်းရိုက်တတ်ချင်တယ်။Camera ဘယ်အမျိုးအစားဝယ်ရင်ကောင်းမလဲဟင်?
ကြက်အူလှည့်က တကယ်ကြပ်တာပဲ။ မဝယ်နိုင်ဘူး ဈေးအရမ်းပေါတယ်။
မိတ်ဒင် ဂျာမဏီလေဗျာ ..ကောင်းတာလေးလည်းညွှန်းရသေးဒယ်
အလကားနောက်တာပါ… DSLR ၀ယ်ရင်တော့ Nikon or Canon ၂ခုထဲကပဲ စဉ်းစားစေချင်ပါတယ်။
ပင်နာဆိုးနစ် ဆမ်ဆောင်း နဲ့ ဆိုနီတို့လည်း DSLR ထုတ်လာပေမယ့် Lens ရွေးချယ်မှု ပေါများတဲ့နေရာမှာ
ဟို ဆြာ ၂ပါးကို မမီဘူးခည… ကိုယ်ဘာရိုက်မှာလဲ နဲ့ပဲရွေးဗျ။
နိုက်ကွန်းတွေရဲ့ အားသာချက်က Noise ငြိမ်တယ် ISO အမြင့် မှာ ပါဖောမန့်စ် ပိုကောင်းတယ်…
ပေါ့ထရိတ် ရိုက်သူတွေ အသုံးများပါတယ်။ နာမည်ကျော် ကို ၀နခွာမဝေးက နိုက်ကွန်းသမားပေါ့ဗျာ..။
ကန်နွန်းတွေကတော့ Focus ဖမ်းတာအလွန်မြန်တယ် Landscape သမားဒွေနဲ့
Wildlife နဲ့ Sports သမားတွေ အသုံးများတယ်ပေါ့။ ဘောလုံးကွင်းဘေးပတ်ပတ်လည်သွားကျိ..
အကုန် အမြှောက်တပ်သားတွေချည်း … ဟိ..။
သားကျွေးမှု မယားကျွေးမှုနဲ့ မအားလပ်နိုင်တဲ့ ဆြာအုပ် ကိုယ်ဇား
အွန်လိုင်းမှာ ယဲဇားမရှိတဲ့ကောင်မလေးဒွေ မြင်ရင် တာဝန်မကင်းသလိုခံစားရတဲ့
လဗြိုလ်သိုးလေး ခြစ်သွေးကြွ ငဂီ့ မှ စေတနာ-၃တန်ပြဌာန်းပြီး ဖြေကြားလိုက်ရပါဒယ်။
ကျွန်တော်လဲ တတ်ချင်လို့ နောက်ပိုင်းလာတက်ပါရစေ.(သင်တန်းကို)
ဟွန်းနော် လူဇိုး သများကို ရင်ခုန်အောင်လုပ်ပီး.. နောက်တော့မှ သင်တန်းတဲ့ ဟွန့်
တပည့်အသစ်စစ်စစ်လေး လာရောက်လေ့လာသွားပါတယ်ချင်ဗျ။ ဆာကြီး … ဆြာအုပ် .. လက်တွေ့စမ်းဖို့ ကင်ပလာ လေး တစ်လုံးလောက်ပါဝယ်ပေးပါလား :-)
ဆြာကြက်-ကျေးကျေးပါ။ Nicnon ပဲဝယ်တော့မယ်။ noise လဲညိမ်ပြီးပြေးနေတဲ့အကောင်တွေကိုအမိအရရိုက်ရမယ်။:)
တွေ့ပီတွေ့ပီ သူဘဲ သူဘဲ……….
၃ မိနစ် ဆြာဖြစ်နည်းမှာ စာတီဖီကိတ် ရပီးတွားဘီ …
အခု သင်ဒန်းကို ဆက်တက်ဘာဒယ် ….
ပီးရင်လည်း တတ် တတ် မတတ် တတ် စာတီဖီကိတ် ပေးရဘာမယ် ..
ဘိုလဲ .. ပေးမှာလား ..
ပေးဘူးဆို တတ်ဘူး … ဒါဗျဲစ် …
စာ့ လက်ထွက် တပဲ့ ဒွေ တော်ကြောင်းကို ပြချင်ရင် လက်ဆင် တစ်ခုပြီးတိုင်း ပြပွဲ လေးကျင်းပ ပေးနော်။
ဆြာအုပ်ရဲ့ဓါတ်ပုံကျောင်းလဲ ကျောင်းအပ်တဲ့သူတွေကို ဓါတ်ပုံရိုက်ကရိယာ(ကင်မရာ)လေးတွေများပေးရင်ဖြင့်…
may thal says:
ဓါတ်ပုံသင်တန်းတွေကို သင်တန်းကြေးမတတ်နိုင်လို့ မကပ်နိုင်ခဲ့တာ ခုမှ ဆြာအုပ်ကျေးဇူးနဲ့ သင်ရတော့တယ် ကျေးဇူးပါ ဆြာရေ သင်တန်းတိုင်းလိုက်တက်ပါ့မယ်ဗျို့